“Ma fahmin sababta loo dhaleeceenayo Lionel Messi”…. Jordi Alba. – Gool FM
“Ma fahmin sababta loo dhaleeceenayo Lionel Messi”…. Jordi Alba.
(Moscow) 24 Juunyo 2018. Jordi Alba ayaa ayaa sheegay inay layaab ku noqotay eedeymaha loo dirayo kabtanka xulka qaranka Argantina Lionel Messi, tan iyo markii uu bilwaaday koobka aduunka.
Xulka qaranka Tango ayaa ku bilaawday qaab aan wanaagsaneen koobka aduunka 2018, kadib markii ay barbaro la galeen Iceland, halka sidoo kale guuldaro xanuun badana ay kala kulmeen Croatia.
Jordi Alba ayaa kadib eedeymaha uu helayo Messi la hadlay saxaafada wuxuuna sheegay in saaxiibkiis uusn u qalmin in lagu eedeeyo xaalada uu ku jiro xulka qaranka Argantina.
“Ma maleysan karo in Messi uu la kulmayo dhaleeceen, xaqiiqdii ma aanan fahmin sababta loo eedeenayo”.
“Waxaa xaqiiqo ah in xulka Argentina uu wanaagsan yahay marka uu isaga la ciyaarayo, laakiin xaalada way ka duwan tahay sidaas marka uu ka maqan yahay, jaamaahiirta waa inay ku faanaan maadaama ay heystaan Lionel Messi”.
“Lio waa ciyaaryahan qaas ah, laakiin nasiib xumo wuxuu la guuldareestay saddex final ah xulkiisa qaranka Argantina, ma ahan wax fudud, laakiin qof walba waa inuu ku qancaa waxa uu ka sameenayo xulka qaranka Argantina”.
Shaxda rasmiga ah ee England vs Panama (Loftus-Cheek oo ku soo bilowday)